Sweden oo wixii lagu wada qoslaba, hada kaligeed qosleysa. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Sweden oo wixii lagu wada qoslaba, hada kaligeed qosleysa.
Madaxa hey´adda ilaalinta caafimaadka dadweynaha Swden: Anders Tegnel Foto: Janerik Henriksson (AFP)
Isbuucyadii ugu danbeeyay waxaa dalalka Woqooyiga Yurub laga dareemayaa sare u kac xoogan oo ku yimid tirada dadka uu ku dhacay xanuunka Coronavirus oo bilihii lasoo dhaafay aad u hooseysay. Waxaana sida la filayo mar kale soo rogaal-celin karo xanuunka Corona, marka la gaaro bilaha qaboobaha ee October iyo wixii ka danbeeyo.
Dalalka Norway iyo Denmark oo kamid ahaa dalalka lagu tirinayo inay ku guuleysteen xakameynta xanuunka Coronavirus, ayaa hada ku dhow inay noqdaan dalalka la siiyay calaamada casaanka, maadaama uu xanuunku aad ugu soo kordhayo, marka loo fiiriyo tirada dadka wadamadaas kunool.
Xili dalalka kale ee Yurub uu sii kordheyso tirada dadka xanuunka laga helay, dalka Sweden waxaa usoo dhacayo tirada dadka xanuunka laga helay ama u dhintay. Xiligan la joogo faafitaanka xanuunka ee SWEDEN ayaa aad uga yar faafitaanka xanuunka ee dalalka Norway iyo Denmark.
Hey´addaha caafimaadka Sweden ayaa sheegay inay si hoose ula socdaan xaaladaha wadamada kale ee Nordica ee xanuunka Corona, ayna qaaadan doonaan talaabooyinka ku haboon hadii ay arkaan halis soo wajahi karto dadweynaha Sweden.
Dowlada Sweden ayaa qaadatay, kuna adkeysatay go´aan ka yaabiyay bulshoweynta caalamka, kaas oo ah inaan haba yaraatee wax xanibaad ah la saarin dhaq-dhaqaada nolosha, waxbarashada iyo ganacsiga, xili dalalka kale ee caalamka ay wadamadooda xireen, cabsi laga qabo faafista xanuunka Awgiis. Waxeyna dhagaha ka fureysteen dhaleeceyn walba oo soo gaareysay, iyaga oo aaminsanaa in cilmi ahaan talaabada ay Sweden qaadatay ay aheyd mida saxda aheyd ee ku habooneyd xakameynta xanuunka Corona.
6 bilood kadib, waxaa hada muuqato in talaabadii Sweden ay aheyd mid sax ah, waxaana hada taladaas koobi-gareynayo dalalka kale ee Yurub oo aan rabin inay mar kale xayiraad saaraan dhaq-dhaqaada nolosha iyo dadweynaha.
Sweden ayaa hada aaminsan inay soo dhaafeen marxaladii ugu adkeyd ee xanuunka, ayna hada qeybo badan oo kamid ah dadweynaha dalkaas uu jirkooda la qabsaday xanuunka, ayna sameysteen difaac kahortagis. Halka dalalka kale ee Yurub ay sugeyso marxalada labaad ee soo noqoshada Corona-virus.
Xigasho/kilde: Nå snakker de om revansj for Tegnell.
Previous articleSV oo mar kale xildhibaan Maryan Xuseen u sharaxay xubinimo baarlamaan.
Next articleNorway: 185 agaasime iyo agaasime waaxeed, 1 qof ayaa ajnabi ah.